Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Faah Faahino kasoo baxaya Qarax Qasaaro dhaliyay oo ka dhacay Maqaayad kutaala Buurhakaba
August 18 2017 15:38:04
Faah Faahino kasoo baxaya Qarax Qasaaro dhaliyay oo ka dhacay Maqaayad kutaala Buurhakaba
Wararka ka imaanaya Degmada Buurhakaba ee gobolka Baay ,ayaa sheegaya in xalay qarax bambaano lagu weeraray maqaayad ay fadhiyeen dad shacab ah iyo ciidao katirsan Dowlada Soomaaliya.
Inta la aqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay qaraxaasi bambaano, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 10-qof oo kale , dadka shaawacmay ayaana qaarkood waxaa dhaawacyadooda loo qaaday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Guddoomiyaha Degmada Buurhakaba Maxamed Cali Nuur , oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qarax bambaano lagu soo tuuray Maqaayad ay dad shacab ah fadhiyeen, waxa uuna tilmaamay in qaraxaasi ka dhasheen qasaaro dhimasho iyo mid dhaawac.
Waxa uu sheegay Gudoomiyaha in ay baxsadeen dadkii ka dambeeyay qaraxaasi bambaano, waxa uuna intaa raaciyay in ciidamada booliiska ay wadaan baaritaano ayna ku daba jiraan kooxihii ka dambeeyay bambaanada maqaayada lagu soo tuuray.
Qaraxyada bambaano iyo miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa inta badan lagu weeraraa maqaayadaha ay inta badan fariistaan ciidamada Dowlada ee kuyaala qaar kamid ah gobolada dalka, waxaana qaraxyadan mararka qaarkood qasarao kasoo gaaraan dad shacab ah.
· mamaan on April 24 2016 ·